Sawirro: Shirka degmooyinka GB oo looga hadlay tacadiyada Haweenka | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sawirro: Shirka degmooyinka GB oo looga hadlay tacadiyada Haweenka
Sawirro: Shirka degmooyinka GB oo looga hadlay tacadiyada Haweenka
Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar filish) ayaa Gudoomiyay shirka Totobaadlaha ah ee degmooyinka gobalka Banaadir oo looga hadlay todobaadkaan arrimaha tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed waxaa uuna ka dhacay xarunta ururka dhalinyarada gobolka Banaadir.
Shirkaan ayaa waxaa goob-joog ka ahaa dhammaan gudoomiye Ku xigeenada Maamulka gobolka banaadir sida maamulka iyo maaliyada,arrimaha bulshada,amniga iyo siyaasada iyo howlaha guud iyo agaasime waaxeedyada gobolka.
Sidoo kale waxaa goob job ka ahaa saraakiisha ciidanka gobolka ee uu hogaaminayay taliyaha qeyb-ta guud ee gobolka banaadir iyo Gudoomiyasha17-ka Totobaadkaan ee gobolka .
Qodobada shirka diirada Lagu saaray waxaa sidoo kale ka mid ahaa arrimaha Amniga, Nadaafadda iyo ka hortaga maandooriya siiba goobaha lagu iibiyom eek u yaala caasimada waxaana guddoomiye cumar filish uu sheegay in guud ahaan maamulka gobolka looga baahanyahay inuu si adag ula dagaalmo.
Maqaal horeKooxo hubeysan oo dilal ka geystay gobolka Shabeelaha Hoose
Maqaal XigaMareykanka iyo Ra’iisul wasaare Rooble oo is-afgarad ka gaaray doorashooyinka